Myanmar Gays Heaven: i love this positions.............
Posted by Myanmar Gays Heaven at 7:28 AM
Labels: Naked Photos, Positions
Anonymous December 26, 2013 at 3:31 AM
boyfriend တစ် ယောက် လောက်လိုချင်သည်
Give me phone no;
boyfriend တစ် ယောက်လောက်လိုချင်သည်
Anonymous December 26, 2013 at 3:40 AM
Ye yint December 26, 2013 at 5:39 AM
Wanna boy friend?
please join swanlinmoe@gmail.com
kopaik5@gmail.comမှ invite sent ထားတယ်
toewana January 6, 2014 at 10:05 PM
ဟိုးသူငယ်ချင်းတို့ ကျွန်နော်က homo ပါ
လုံးဝမနွဲ့ပါဘူးနွဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်နော် က 23ရန်ကုန်မှာနေတယ်
toewana428@gmail.com ကိုadd နိုင်တယ် ညီအကိုလိုခင်လို့ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျ
ခင်လို့ရပါတယ် မင်း ph နံပါတ်ပေးလေ ကိုကရန်ကုန်ကပါ မနွဲ့ ဘူး သာမန်ရုပ်ပါ
I need the love.ကျွန်တော်က homoပါ
ကျန်တော်ကိုခင်ချင်တယ်ဆိုရင် sawyai123@gmail.comကို add နိုင်ပါတယ်
ခံချင်တယ် အဲ.လိုလေး ဘယ်သူလိုးပေးမလဲ arkar0007
မန်းလေးကပါ ဖင်ခံချင်ပါတယ် 250699753ကိုဆက်ပါ
tin wam February 1, 2014 at 10:28 PM
aww လိုချင်ရင် ပြောပါ
ဖင်ခံချင်ရင်zayyarmaw41ကို addလိုက်ပါ လိုးချင်နေပါသည်
Anonymous February 20, 2014 at 2:07 AM
ခံချင်​ရင်​ ဖုန်းဆက်​လိုက်​ Top ပါ။ 095144092
Seng Aung March 7, 2014 at 11:21 AM
မြစ်ကြီးနား က ရုပ်ချောချောနဲ့boy friend တစ်ယောက် လောက်လိုချင်တယ်ဗျာ...ကျွန်တော်ကမနွဲ့ဘူး မနွဲ့တဲ့BF ပဲလိုချင်တယ်...၀ါသနာ ပါရင် ph နံပါတ်ပေးကြပါ
ရန်​ကုန်​ ၂၃ပါ မနွဲ့တဲ့ boyများ addလိုက်​ပါ
လိုင် သာ ယာက
250 758 608 call me
Ye Lin May 8, 2015 at 3:43 AM
datha kyawaung June 23, 2015 at 6:33 AM
Ygn ka homo nae fri. phyt chin par tal. dathakyawaung@gmail ko at pay par....
min khant moe October 1, 2015 at 7:38 AM
​ကောင်းလိုက်​တ့ပုံ​လေး​တွေ ​ချောလိုက်​တာ ကြိုက်​တယ်